नेपालीपनमा रमाउन सौराहा फुड फेष्टिवलमा चुले निम्तो : संयोजक गिरी – Saurahaonline.com
नेपालीपनमा रमाउन सौराहा फुड फेष्टिवलमा चुले निम्तो : संयोजक गिरी
ध्रुव गिरी सौराहाका स्थापित युवा व्यवसायी हुन् । सपना भिलेजको सञ्चालन समेत रहेका गिरीले चितवनको पर्यटन प्रर्वद्धनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सौराहाका रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुको साझा संस्था रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसियसन रेवान सौराहाका बरिष्ठ सदस्य गिरी मंगलवारबाट सुरु भएको १४ औ सौराहा फुड फेष्टिवलको संयोजक समेत हुन् ।
चितवनको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हरेक वर्ष सौराहामा हुँदै आएको फुड फेष्टिवलको उद्देश्य र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा संयोजक गिरीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः
सौराहा फुड फेष्टिवल गर्नुको उद्देश्य के हो ?
हरेक वर्ष सौराहामा फुड फेष्टिवल आयोजना हुँदै आएको छ । यो १४ औं संस्करण हो । चितवनको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हामीले फेष्टिवल आयोजना गर्दै आएका छौं । विदेशी पर्यटकहरु कम हुने समय भएकाले आएका पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन र स्वदेशी पर्यटकको संख्या बढाउन फेष्टिवल आयोजना गरिएको हो । पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि पनि फेष्टिवल कोसेढुंगा सावित हुदै आएको छ ।
प्रणय दिवसमा फेष्टिवल गर्नुहुन्छ, यसले पर्यटक प्रवद्र्धनमा कसरी टेवा पु¥याउछ ?
प्रणय दिवस एउटा अवसर मात्र हो । फेष्टिवल गर्न प्रणय दिवसको मौका मात्र छोपिएको हो । प्रणय दिवसमा युगल जोडीहरुलाई रमाउने वातावरण संगै पर्यटकको संख्या बृद्धि गर्ने उद्देश्य हो । फेष्टिवलले चितवनको पर्यटन प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेका हामीले महसुस गरेका छौं । भ्रमण बर्ष चलिरहेका कारण फेष्टिवलले चितवनमा थप पर्यटक भित्र्याउने छ ।
फेष्टिवलमा कस्ता खानाका परिकार पाइन्छ ?
फेष्टिवलमा थारुका परम्परागतगत खानादेखि विदेशी खानाका परिकार उपलब्ध हुनेछन् । फेष्टिवलमा ५० वटा खानाका स्टल छन् । पर्यटन क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको खाना पनि हो । मान्छे स्वच्छ हुन, स्वच्छ खाना खान आवश्यक छ । सौराहाले प्रदान गर्ने सेवा र खानाको प्रवद्र्धनका गर्न पनि फेष्टिवल आयोजना गरिएको हो ।
खानामा व्यवसायीहरुले चर्को मुल्य लिन्छन भनेर गुनासो छ नी ?
विगतका फेष्टिवलमा यस्तो गुनासो हामीले पनि सुन्यौ तर १४ औं फेष्टिवलमा यस्तो हुन दिँदैनौ । गुनासो नआओस् भनेर हामीले फेष्टिवलका स्टलमा राख्ने व्यवसायीहरुलाई मूल्यसूची अनिवार्य गरेका छौं । अब यस्तो हुदैन । कुनै व्यवसायीले खानामा चर्को मूल्य लिए भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी नियमअनुसार कारबाही गर्नेछौँ । यस पटक हामीले फेष्टिवलको अबसर पारेर होटलमा ३०,खानामा १५ र साना व्यवसायमा १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं ।
फेष्टिवलबाट भएको आम्दानी केमा खर्च गर्नुहुन्छ ?
फेष्टिवलमा भएका आम्दानी हरेक वर्ष हामीले सामाजिक क्षेत्रका खर्च गर्दैै आएका छौं । यस पटक टिकटबाट उठेको रकम मध्ये ७५ प्रतिशत रकम गौतमबुद्ध अन्तराष्टिय क्रिकेट रंगशालालाई सहयोग गर्दैछौं ।
फेष्टिवल चलिरहदा हुने अन्य गतिविधि के के छन् ?
हरेक दिन राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुतीसंगै फेष्टिवलमा प्रथम मेयर कप भलिवल प्रतियोगिता, सडक किनारमै खाने र सडकमा सांस्कृतिक कार्यक्रम अबलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसको अलवा प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिता,वेटर रेस,महिलाहरुको म्युजिकल चेयर,वालवालिकाको बेलुन फुटाइ,डारी तान्ने,अन्तर विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता तथा सडक नाटक लगायतका कार्यक्रम हुनेछन ।
फेष्टिकलमा को को कलाकार आउदैछन ?
फेष्टिवलको सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपती शर्मा, कुलेन्द्र विक, सम्झना भण्डारी, दुर्गेश थापा, शान्ती श्री परियार, अलमोडा राना उप्रेती, सम्झना लामिछाने मगर, कमल खत्री, कृष्ण अखेली, दुर्गा सापकोटा, रमेशराज भट्टराई, डिला बिक, रविन लामिछाने, राजन कार्की, अपेक्षा गिरी, जीवन दाहाल, चोलिन्द्र पौडेल, शितल शर्मा, अर्जुन सापकोटा, मनोज महतो, अनु चौधरी, डिबि लोप्चन, द न्याटिभ ब्याण्ड, बलराम सरकार लगायत परम्परागत सांस्कृति नृत्य हुनेछन ।